Depiote Brunel Razafitsiandraofa “Fanapahan-kevitra mamotika no misy eto”
Ny fitondrana ankapobeny mihitsy no tsy misy ilana azy intsony ary tsy mamaly ny filan’ny vahoaka, fa ny vahiny no harovana eto, hoy ny solombavambahoaka voafidy tany Ikongo,
tamin’ny alalan’ny MAPAR Razafitsiandraofa Jean Brunel. Manana foloalindahy be galona maro isika, kanefa tsy natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa hiaro ny vahiny. Efa noporofoin’ny filoha tamin’ilay horonantsary fotoam-bita izany fa miaro ny vahiny izy, hoy ity depiote ity. Rehefa ny vahiny no harovana dia mipoitra daholo izy rehetra, fa rehefa ny vahoaka no mila azy dia tsy ampy olona, tsy ampy fitaovana, tsy manana solika ... Singa anisan’ny mahatonga ny mpiray tanindrazana hiteny fa tsy mahaleotena isika. Rehefa jerena ny fanapahan-kevitra toy ny lalàna nolanianay teo anivon’ny antenimieram-pirenena fotsiny, dia nisy ny mametraka fa ny teratany Malagasy dia tsy mahazo mikitikitika ny merkiora fa tsy maintsy miantso vahiny rehefa hikirakira azy kanefa nofidiana tao amin’ny antenimieram-pirenena io, hoy izy. Raha jerena ny mikasika ny fiainana andavanandro dia tsy mamaly ary tsy mankany amin’ny mpiray tanindrazana mihitsy ny fanapahan-kevitra raisina, toy ny vola vaovao vao havoaka. Ny an’ny olona rehefa mitombo ny harinkarena dia miha kely ny ravim-bola. Ny antsika kosa vao mainka hampitomboina. Porofo io fa mihena sy ahena ny sandan’ny vola ary mitsotsorika mankany amin’ny fahantrana. Tsy mamaly ny hetahetan’ny vahoaka ny fepetra raisin’ny fitondrana !